Mormiiwwaan Tibbana Itoopiyaa Keessatti Godhamaa Jiraniratti Waldeeggarsi Oromoo fi Amaara Edduutti Mullate
Hagayya 09, 2016
Hiriira mormii Oromoon Finfinneeti bahe, Hagayya 6, 2016
Mormiiwwan dhiheenya kana Itoophiyaa keessaatti godhaman irratti lakkoofsi namoota lubuun badee gara 100 gahuu, bayyeen madaahuu fi han dhibbaan lakkaawwamaan to’annaa jala olfamuu isaanitu gabaafamaa jira. Jiill Kireeg , Naayroobii irraa roorroo ummaanii qabuu, akkasumas fundurri biyyatti maal ta’inna waan jedhuu laalchisee xinxalaa qopheesitetti.
Mormii nannoo Oromiyaatif Amaaraatti sambatduraa fi dilbata godhaman irratti lakkoofsi namotoa ajjeefamanii dabalaatuma jira.
Dhaabbanni mirga dhala namaatii falmu, Aministii Internaashinaal, lubbuun bade hoo xinnaate 97 jedha. Amnisti Internaashinaalitti qorataa han ta’e Obbo Fissehaa Teklee, “Umannii Oromoo fi Amaaraa mormii yeroo walfakkaatatti geggeessaa jiirataniis roorron isaan qaban garuu adda” jedha.
Awwol Alloo Lendan Iskuul oof Ikonomiikisitti barsiisaadhaf qorataa mirga dhala namaati. Akka inni jedhutti gareen lamaan wal qeeqa fi wal himaachaa turan amma walitti dhufaa jirachuu isaanii dubbata. Gabaasni sagalee kinooti.
Hiriira Finfinnee Irratti Namoota Heduutu Reebame Jedhu Jiraattonni
Hiriira Sanbata Darbee Irrtti Lubbuun Namaa Darbee Kaanis Madaa’anii Hedduun Hidhaman Jedhu Jiraattonni
Haati-qabeenyaa fi Gulaaltuun Gaazzexaa “Addis Standard” Kora OSA Irratti Ibsa Kennan
KFO: Obbo Beqqelee Garbaa fi Hoogganoonni KFO ka biroon Har’a Mana-murtiitti Dhihaatan; Olbaanaa Leellisaa Mana-hidhaa Qaallittii Keessatti Jabaa Dhukkubsataa Jira. Oromiyaa Keessatti Har’a Hidhaa fi Reebichi Hammaatee Oole